Ngaba Kukulungele Ukutya I-Snow, okanye Ingaba Kukhona Iingozi Zempilo?
Ewe, kulungile ukunyusa iqhwa ngezinye izinto
Ngeke ucinge kabini malunga nokubamba iqhwa eluntwini, kodwa usebenzisa ikhephu ukwenza ice cream ice cream okanye ukuyibilikisa amanzi okusela kunokukwenza uzibuze ukuba ukhuselekile okanye cha. Ngokukhuselekileyo ukutya ikhephu okanye ukuyisebenzisa ukusela okanye ukwenza ice cream, kodwa kukho ezinye izinto ezibalulekileyo. Ukuba iqhwa lilungu elimhlophe, unokukhusela ngokukhuselekileyo. Kodwa ukuba iqhwa lilubala nangaliphi na indlela, kuya kufuneka unqume, hlola umbala walo, kwaye uqonde oko kuthetha.
Kwakhona kubalulekile ukuqaphela apho uqokelela khona iqhwa. Funda ukuze ubone xa kukhuselekile ukutya ikhephu-kwaye xa kunokufaka ingozi yempilo.
Iqhwa li-crystallized water, elithetha ukuba ngokwenene lihlambulukile kuninzi iindidi zemvula. Ukuba ucinga ngendlela ikhephu ehamba ngayo emoyeni, ngokuyinxalenye yamanzi aqhoqhoqhokileyo, aqhotyoshelwe nge-particle encinci, ngoko kuya kuba yinto ecocekileyo kunezinto eziphuma kwi-faucet yakho. Abakwa-Campers kunye neentaba kwihlabathi lonke basebenzisa ikhephu njengomthombo wamanzi oyintloko ngaphandle kwesiganeko. Nangona uhlala kwisixeko, ungadla ikhephu ecocekileyo.
Iqhwa liwela emoyeni ngaphambi kokushaya umhlaba, ngoko iyakuthabatha iincinci zothuli kunye nezinye izinto ezingcolileyo emoyeni. Ukuba iqhwa liye lawela ixesha elide, uninzi lwama particles sele luhlanjwe. Ingqwalasela enkulu yokukhusela kwekhephu iphi na indlela oqokelela ngayo iqhwa.
Iqoqo le-Snow Safe
Awufuni ikhephu elichaphazela umhlaba okanye isitrato, ngokunjalo mhlawumbi uqoke iqhwa elicocekileyo ngaphezu kwalolu qhekeza okanye sebenzisa i-pan ecocekileyo okanye isitya ukuqokelela iqhwa elihla. Ukuba uceba ukunyibilika kwekhephu ngamanzi okusela, unokuqinisekisa ukuba uhlambulukile ngokuyisebenzisa ngokusebenzisa ifowuni. Ukuba unombane, ungabilisa iqhwa.
Qinisekisa ukuba usebenzisa ikhephu eligqithileyo ongayifumanayo, kuba umoya ubeka ugcino olungcolileyo kunye nokungcola kwiqonga eliphezulu leqhwa phakathi kwelanga okanye njalo.
Xa Akufanele Udle Iqhwa
Mhlawumbi sele ukwazi ukuphepha ikhephu eliphuzi . Lo mmbala ungumqondiso omkhulu wokulumkisa ukuba ikhephu ihlambulukile, kaninzi nge-urine. Ngokufanayo, ungadli elinye iqhwa elilubala . Imibala ebomvu okanye eluhlaza ingabonakalisa ubukho be-algae, enokuthi okanye engakufanelekanga. Musa ukuthatha ithuba.
Enye imibala ukugwema ibandakanya abamnyama, abomdaka, abomvu, kunye naluphi na iqhwa elinemiqolo ebonakalayo ye-grit okanye igrime. Ikhephu eliwela kwiindawo zokutshaya, iibhulophu ezinobungozi, kunye neengozi zemisebe (cinga iChernobyl kunye neFukushima) akufanele zifakwe.
Izilumkiso eziqhelekileyo malunga nokutya kwekhephu zichaphazela ukutya iqhwa ngasekuhlaleni. Ukukhupha umfutho okwakusetyenziselwa ukufumana iindawo zokuhlala ezikhokelayo, eziza kuphuma kwikhephu. Umkhokelo onobungozi awunayo inkxalabo yanamhlanje, kodwa kusengcono ukuqokelela ikhefu kude nezitalato ezixakekile.
Isibane kunye nePlasma Photo Gallery
Amanyathelo okuguqula iFahrenheit eKelvin
ICeramic Inkcazo kunye neKhemistry
Ziziphi Iimeko Eziqhelekileyo Zombuso? - I-Standard Standard and Pressure
Amagqabha eCubic ukuya kwiiCubic intshi Ukuguqulwa
I-Alloys ye-Brass kunye noBuchule babo beMikhali
Ngaba i-Brass isisombululo?
Iimpawu ezibalulekileyo kunye nemibuzo yokuhlolwa kweScientific Testing
Ixabiso leNobel elibaluleke kangakanani?
I-Novena yokunikezelwa kweNtombi kaMariya
I-Pros & Cons Cons Gun ye-Ownership kunye neMithetho yokuSebenza yabanye
Kutheni ukuphakama kunye neSimo soMzimba sidlala indima kwizopolitiko zaseMerika
Funda Ngezigaba zeMeiosis
I-Top 10 ye-Dinosaurs ephezulu kakhulu
IiHome zeekhonkrithi - Oko kuthethwa nguPhando
Iintlobo ezili-10 zeeNzululwazi zoLwandle
Imbali ye-Apple iikhomputha
Ukufumanisa Umsebenzi we-ESL Abafundi-Icandelo 2: UkuBhala kwakhona kwakhona
I-UFO ihamba ngeShipu e-Bermuda Triangle
UMarko Millar: I-Blockbusters ye-Movie Yomkhulu kakhulu ye-Movie Blockbusters
I-Huntingdon College Admissions
Incwadi yam yeP
IYunivesithi yaseNyakatho-ntshona yeGPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Umkhiqizo oMzimbeni ovela kwiSubility Solubility Example Problem
Iinkampani zokuguquguquka kweGesi yeNdalo
Umthetho wesiBini we-Thermodynamics kunye ne-Evolution
Fumanisa Indima ye-Eagle Bald kwiLifa leMerika
Ukhuseleko lweNtlalo yeNtlalo yezoKhuselo
Ukuguqula iiMillimeters ukuya kwiMitha Example Problem